Zign Hotel & Wong Phrachan Beach ~ Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Pattaya » Hotely Zign Beach sy Wong Phrachan Beach
Torolàlana Wong Phrachan Pattaya
Famaritana ny tondro zotra Wong Phrachan
Torolàlana Wong Phrachan
Weather on the beach Torolàlana Wong Phrachan
Sary sy horonan-tsary amin'ny tora-pasika
Fampahalalana ho an'ny Pantai Pratumnak
Fahatsiarovan'i Wong Prachan (nHotely trano)
ao Pattaya. Overview
Pattaya North dia misy torapasika fandroana maromaro. Anisan'izany ny tora-pasika ao amin'ny Zign Hotel, Wong Prachan sy ny tora-pasika ao amin'ny Garden Sea View Hotel.
Avy amin'ny faritanin'i Wong Prachan, tsara indrindra amin'ireo fomba fijery maimaimpoana Tempolin'ny fahamarinana.
Azonao atao ny miditra ao amin'ny Wong Prachan amin'ny alàlan'ny Hotel Hotel View.
Kely tsy fantatra ireo torapasika ireo. Ary misy vitsivitsy te-handeha hiakatra amin'ny morontsiraka avaratra amin'ny tanàna, ary avy eo mandeha amin'ny sehatry ny hotely mankany amin'ny tora-pasika. Na dia manome tombony ho azy ireo aza ireo toera-ponenana ireo: misy vitsivitsy miala voly amin'ny tora-pasika roa, ireo torapasika ireo dia tena madio ary voahaja tsara, toa an'i Pattaya.
Ary na dia hoe trano fandraisam-bahiny aza izy ireo, saingy ity dia fivoriambe rehetra, satria ny lalàna dia ny toera-pasika rehetra any Thailand no manana ny toerany.
Toerana ao amin'ny Pantai Wong Prachan sy ny manodidina
Ireo moron-dranomasina ireo, noho ny trano fandraisam-bahiny izay mijery azy ireo dia milamina tsara sy mihintsy.
Any amoron-dranomasina no misy ny moron-dranomasina ary misy 1 km eo ho eo. Tsy mitovy amin'ireo torapasika maro hafa any Pattaya, tsara sy fotsy ny fasika eto, ary ny rano dia saika mazava foana. Miakatra tsikelikely ny fidirana amin'ny rano, izay mampiavaka io torapasika io eo amin'ireo mpizahatany manao vakansy miaraka amin'ny ankizy.
Ankoatra ny hakanton'ny voajanahary dia ny toeran'i Wong Prachan Beach dia manavaka ihany koa amin'ny hoe tsy misy mpivarotra, kafe, bar, ary trano fisakafoanana amoron-tsiraka, ary foana ny rivo-piainana milamina. Izany rehetra izany dia ao anatin'ny elanelan'ny dia lavitra, fa tsy mivantana eo amoron-dranomasina.
Milamina sy tony ny tora-pasika.
Manakaiky ny morontsiraka dia misy fampandrosanana mahafinaritra sy faritry ny valan-javaboarin'ny iray amin'ireo hotely, fa misoratra malalaka ihany koa.
Valan-javaboarin'i Wong Prachan
Aiza ny tora-pasika? Ahoana no hahatongavana any
Address: Distrika Bang Lamung, Chon Buri 20150, Thailandy
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https: //g.page/GardenSeaView? share
Torapasika amin'ny sarintany
Weather on Wong Prachan Beach
Ao amin'ny Widget Interactive eto ambany ahitanao ny toetrandro ankehitriny eo amoron-dranomasina. Ao amin'ny faran'ny fidirana ny zoro dia ny fandaharam-potoana ahafahanao mandroso, ka noho izany ny famoronana toetr'andro ho an'ny filanao.
Pratumnak (Pantai Pratumnak). Sary sy horonan-tsary
Ny trano fandraisam-bahiny akaikin'ny Pantai Wong Prachan
Valiny ho an'ny Wong Prachan Beach (Google reviews)